म १९ वर्षीया युवती हुँ । आगामी माघ महिनामा मेरो विवाह हुने लगभग पक्का भएको छ । मेरो विवाह गर्ने केटाको उमेर यस्तै २५ वर्षको हुनुपर्छ । विवाहको प्रसंग उठेदेखि मलाई यौनसम्पर्कको विषयलाई लिएर डर लागिरहेको छ । विवाहपछि सबै श्रीमान्–श्रीमतीको यौनसम्पर्क हुन्छ । मेरो पनि हुने नै छ । मैले सुनेअनुसार पुरुषको लिंग उत्तेजित अवस्थामा मोटो, कडा र लामो हुन्छ । कुनै–कुनै पुरुषको त अत्यधिक ठूलो हुने हुनाले योनिमा छिराउँदा रगत आउने र दुख्ने गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ । मैले अहिलेसम्म कसैसँग शारीरिक सम्पर्क नराखेको र वयष्क पुरुषको उत्तेजित लिंग नदेखेका कारण कतै मेरो हुनेवाला श्रीमान्को पनि ठूलो हुने र त्यसले मलाई निकै पीडा देला भन्ने लागेको छ । यस्तो बेलामा मैले के गर्दा मलाई नदुखी आनन्द लिन सकिन्छ ?
लिंगको उत्तेजना र नाप ?
तपाईंलाई थाहै भएको कुरा हो कि कारणअनुसार यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई भएको यस भयको जडसम्म पुग्न आवश्यक हुन्छ । त्यसैले तपाईंले यसको जडसम्म पुग्न आफैंलाई र आफ्नो विगतका घटना र त्यसले आफूलाई पारेको प्रभावबारेमा केलाउनुपर्ने हुन्छ । तर्कपूर्ण रूपमा विचार गर्नुभयो भने तपाईंमा भएको नकारात्मक सोच हटाउन सकिन्छ । यदि लिंग निकै लामो भएको स्थितिमा फरक आशनको प्रयोग वा लिंग भित्रैसम्म नपसाउने गरेर पनि यौनसम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
कतिपय स्थितिमा आफैंले आफ्नो स्थिति केलाउन सजिलो नहुन सक्छ । यसका लागि तपाईंले मनोचिकित्सक, मनोरोग विशेषज्ञ वा मनोपरामर्श दिने व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ ।